मैले कसरी Prepaid Daily Data Plan सब्सक्राइब गर्न सक्छु ।
चरण3- तपाईंले चाहेको Daily Data Plan MB मेनुबाट छनोट गर्नुहोस्
चरण 1 - *118*2*1*# डायल गर्नुहोस्
चरण2- MB-Day Plan का लागि 1 छनोट गर्नुहोस्
SMS मार्फत <On MBDay> 28118 मा पठाउनुहोस्
कृपया सफल एक्टिभेसनका लागि तपाईंसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस् जस्तै: MB-Day एक्टिभेसनका लागि RM5 ।
के वैधता अवधि सकिँदा Daily Data Plans स्वत: नवीकरण हुन्छ ?
हुन्छ । वैधता अवधि सकिँदा MB-Day बाहेकका प्लानहरू स्वत: नवीकरण हुनेछन् तर त्यसका लागि तपाईंको एकाउन्टमा सब्सक्राइब गर्नका लागि पर्याप्त ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।
के मैले मेरो सब्सक्रिप्सन स्वत: नवीकरण हुन बाँकी छ भनेर SMS सूचना पाउँछु ।
पाउनुहुन्छ । तपाईंले तपाईंको स्वत: नवीकरण हुनभन्दा आगाडी SMS नोटिफिकेसनहरू पाउनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंको सब्सक्रिप्सन नवीकरण भइसकेपछि अर्को SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
के सब्सक्रिप्सन अवधिभरि मैले कति प्रयोग गरे भनेर कुनै नोटिफिकेसनहरू प्राप्त हुनेछन् ?
हुनेछन्, प्रयोग गरिरहेको विभिन्न चरणहरूमा तपाईंलाई SMS अलर्टहरू र वेबद्वारा पुन: प्रेषितहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि तपाईंको कोटा सक्किनै लागेको वा नवीकरण गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा ।
Daily Data Plans सब्सक्राइब गर्न मलाई कति न्यूनतम क्रेडिटको आवश्यकता पर्छ ?
तपाईंले चाहेको प्लान सब्सक्राइब गर्न तपाईंसँग तपाईंको एकाउन्टमा पर्याप्त ब्यालेन्स भएकै हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, MB-Day सब्सक्राइब गर्नका लागि तपाईंसँग तपाईंको सब्सक्रिप्सन वालेटमा RM5 भन्दा बढी रकम भएको हुनुपर्छ ।
मैले कसरी आफ्नो डाटा प्रयोग जाँच गर्न सक्छु ?
चरण2- ‘USAGE BALANCE’ मा स्क्रोल गर्नुहोस्
चरण3- Daily Data Plan कोटा ब्यालेन्सको विस्तृत विवरणका लागि माथितर्फ स्वाइप गर्नुहोस् ।
*118*2*3# डायल गर्नुहोस्
28118 मा <MBDay> पठाउनुहोस्
के मैले Prepaid Daily Data Plan अनसब्सक्राइब गर्न सक्छु ।
सक्नुहुन्छ, तपाईंले आफूलाई MB-Day plan बाट अनसब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । अनसब्सक्राइब गर्नका लागि *118*2*4# डायल गर्नुहोस् । कन्फर्ममेशन पछि तुरुन्तै तपाईंको प्लान हट्नेछ ।
तपाईंले स्वत: नवीकरण रोक्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र प्लानको म्याद सकिएपछि तपाईंको प्लान हट्नेछ । स्वत: नवीकरण रोक्न *118*2*5# डायल गर्नुहोस् ।
यदि मेरो एकाउन्ट निष्क्रिय छ भने के मैले MB Data Plans सब्सक्राइब गर्न सक्छु ?
यदि तपाईंले MB Data Plans सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंको एकाउन्ट एक्टिभ (सक्रिय) हुनैपर्छ ।
के मेरो Daily Data Plan निष्क्रिय अवधिमा स्वत: नवीकरण हुन्छ ?
हुँदैन, निष्क्रिय अवधिमा तपाईंको प्लान स्वत: नवीकरण हुने छैन ।